Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » I-S.Pellegrino Ophumelele iMbasa ye-Academy ye-Chef eNtsha Yaziswa
Eyona talente inomdla yokukhangela abapheki abancinci emhlabeni, eyenziwe ngu S.Pellegrino Young Chef Academy ukukhulisa ikamva leGastronomy, yafikelela esiphelweni esivuyisayo ngorhatya lwangoMgqibelo nge30th EyeDwarha. Ngexesha le Umkhulu uFinale of Ukhuphiswano lwe-S.Pellegrino Young Chef Academy 2019-21, emva kwemijikelo yokupheka okukhuphisanayo, UJerome Ianmark Calayag, emele i-UK kunye noMmandla woMntla Yurophu, ubhengezwe njengophumeleleyo S.Pellegrino Young Chef Academy Award 2019-21. UJerome uyamangalisa "Imifuno ethobekileyo" Utyikityo Dish wakhawulwa ngentsebenziswano kunye nomcebisi wakhe, uDavid Ljungqvist, wonwabile iGrand Jury ebekekileyo ngokukhetha kwakhe izithako, izakhono zakhe, ubukrelekrele bakhe, ubuhle besitya kunye nomyalezo emva kwepleyiti, ebetha amangenelo avela kwabanye abapheki abali-9 abanetalente abavela kwihlabathi liphela.
Ekuphumeleleni iwonga elidumileyo, uJerome Ianmark Calayag wehla kwimbali ecaleni iintshatsheli zangaphambili Mark Moriarty (2015), Mitch Lienhard (2016) kunye Yasuhiro Fujio (2018) kodwa, okona kubaluleke kakhulu, ume njengesibane samathuba njengoko eqalisa uhambo oluvuselelayo ukunceda ukubumba i-gastronomy yangomso. Ikhethwe luKhuphiswano lweS.Pellegrino Chef Young Academy's Grand Jury yenziwe ziingxilimbela ezintandathu zegastronomy yehlabathi- Enrico Bartolini, Manu Buffara, Andreas Caminada, Mauro Colagreco, Gavin Kaysen, Clare Smyth – UJerome uye walithimba iqela elithe nalo lachukunyiswa ngumgangatho uwonke wokhuphiswano. Usapho lakwaS.Pellegrino luvakalisa umbulelo UPim Techamuanvivit owathi ngamava akhe waba negalelo elincomekayo kukhuphiswano, phakathi kwezigaba zalo ezahlukeneyo, kwaye ngubani ngenxa yezithintelo zobhubhane akakwazanga ukubhabha ukuya e-Italiya kumsitho weGrand Final.
Ukhuphiswano lwalo nyaka lwaziswa Ntathu amabhaso amatsha encedisana neMbasa ye-S.Pellegrino Young Chef Academy kwaye ibonakalisa inkolelo ye-S.Pellegrino kunye nenkxaso yamandla okuguqula i-gastronomy kunye neempembelelo zayo ngaphaya kwekhitshi. Elissa Abou Tasse, emele iAfrika kunye noMbindi Mpuma, kunye "negadi ka-Adam" iphumelele i Imbasa ye-Acqua Panna yoQhagamshelwano kwiGastronomy, eqonda amandla akhe okulungiselela iSiginitsha Dish enezithako ezibonisa ubutyebi bemvelaphi yakhe yenkcubeko kunye nokubonakalisa unxibelelwano olugqibeleleyo phakathi kweenkcubeko ezahlukeneyo. Callan Austin, evela kuMmandla we-Afrika kunye noMbindi Mpuma, kunye ne "I-ghost net" ifumene Imbasa ye-S.Pellegrino yoXanduva lweNtlalo, eyabelwe ngu Ukutya Kwenziwe Kuhle kumpheki obeke phambili iresiphi emele kakuhle umgaqo wokutya njengesiphumo sezenzo ezinoxanduva loluntu. Kwaye ekugqibeleni, uluntu lwe-intanethi lwe Fine Dining Lovers eyabelwe yona Fine Dining Lovers Ukutya iMbasa Wokucinga ukuba Umfanekiso wesibambi-ndawo sika-Andrea Ravasio, ukusuka kumazwe ase-Iberia naseMeditera, njengompheki osemncinci owayemele kakuhle inkolelo yakhe ngaphakathi kwe "El domingo del campesino" Isitya sokutyikitya.
UKhuphiswano lweS.Pellegrino lweChef eselula ngumsebenzi ophambili we S.Pellegrino Young Chef Academy iprojekthi, eyasungulwa ngu-S.Pellegrino kunyaka ophelileyo, ngenjongo yokukhulisa ikamva le-gastronomy ngokufumanisa iitalente eziselula kunye nokubaxhobisa ngesicwangciso semfundo, ukucebisa kunye namava amathuba. Olu shicilelo loKhuphiswano luye lwachukumisa kakhulu kunangaphambili, lubona abafaki-zicelo abavela kwihlabathi liphela. Abapheki abancinci abali-135 baphumelele ukhetho lokuqala kwaye bathatha inxaxheba ekuphekeni ngokukhawuleza phambi kweqela lejaji lezizwe ngezizwe elivela kumazwe athatha inxaxheba kwiingingqi ezili-12. I-S.Pellegrino Young Chef Academy Competition Regional Winners yafika kwiGrand Finale emva kwendlela yokufundisa apho, ngenxa yenkxaso yoMpheki Omkhulu, bakwazi ukucokisa izitya zabo zokutyikitya.
Isiganeko seentsuku ezi-3 safikelela kuvuthondaba ngesidlo sangokuhlwa esikhethekileyo. Isigebenga se-gastronomy UMassimo Bottura neqela lakhe- Takahiko Kondo, Riccardo Forapani, Francesco Vincenzi, Jessica Rosval kunye noBernardo Paladini - vumela iindwendwe zive umoya wokwenyani we-S.Pellegrino Young Chef Academy, indawo eyenziwe ngetalente, ubuchule bokuyila, ukusungula izinto ezintsha, ukuthanda kunye nobugcisa. UMassimo Bottura, njengeNgcali yoMsitho kunye noMcebisi okhuthazayo, wema ecaleni kwabapheki abahlanu, ukuze benze amaxesha amahlanu awodwa nakhethekileyo okupheka, ngamnye edibanisa isitayile, umoya kunye nembali yeqela lakhe.
UStefano Bolognese, UMlawuli weCandelo loShishino lwaMazwe ngaMazwe eSanpellegrino: “Sinebhongo ngenene ngomsitho wokuGqibela oMkhulu osinike ithuba lokuphinda sinxibelelane ngokobuqu kunye nokubona iitalente ezimangalisayo emsebenzini, ukwenza into engaqhelekanga kunye. Ke ngoko, sibulela kubo bonke abathe basihlanganisa nathi besuka kwihlabathi liphela ukuze babelane ngochulumanco lwezi ntsuku zintathu. Yayimangalisa. UJerome ukhazimle ngenene phambi kweGrand Jury yethu ebekekileyo, kwaye sivuyisana kakhulu naye, ngomnqweno oza kuzisa inkanuko yakhe kunye nokucinga etafileni ukunceda ukubumba i-gastronomy yangomso. Sikwafuna ukubulela zonke iitalente eziselula, abadlali abaphambili kolu hambo lukhuthazayo kwaye sele bengamalungu e-S.Pellegrino Young Chef Academy yethu: bangabatshintshi bemidlalo yexesha elizayo kwaye sibanqwenelela ithamsanqa kunye nomsebenzi oqaqambileyo. Ukukhangela kwethu iitalente zokuyila akuyeki kwaye asinakulinda ukubhengeza iinkcukacha ezithe vetshe ngohlelo olulandelayo lweS.Pellegrino Young Chef Academy Competition”.